ဗစ်တိုးရီးယားအမှု - ရဲသတင်းစာရှင်းလင်းချက် ဥပဒေနဲင...
20 ธ.ค. 2562 - 00:31 น.
ဗစ်တိုးရီးယားအမှုအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့က လုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ ရဲဇာနည် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာကနေ ဗစ်တိုးရီးယားနဲ့ မိသားစုဘယ်သူဆိုတာ ထုတ်ဖော်ခဲ့တာဟာ ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းနေရင် တရားစွဲမယ်လို့ ဗစ်တိုးရီးယားဖခင် ဖြစ်သူက ပြောပါတယ်။
သံသယ တရားခံ ကိုအောင်ကြီးကို တရားရှင် လွှတ်လိုက်ပြီး နောက်တစ်နေ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗစ်တိုးရီးယားကို တရားရုံးမှာ စစ်မယ့်ပုံစံ
ဗစ်တိုးရီးယား အမှုအတွက် သက်သေများ
အဲဒီ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲက ပြောကြားချက်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ သတင်းတွေတင်တဲ့ ရဲဇာနည် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်ကနေ နေပြည်တော် Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းက လိင်မတရားကျင့်ခံရတယ်ဆိုပြီး တိုင်တန်းထားတဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ နာမည်နဲ့ မိသားစု ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ထုတ်ဖော်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ထုတ်ဖော်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နစ်နာသူ ကလေးရဲ့ ဖခင်က "ဒါက လူတစ်ယောက်မှာ ထားရှိရမယ့် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာကို ဖောက်ဖျက်ရုံမကဘူး။ ဥပဒေကို ကျူးလွန်တာ။ ကျွန်တော်တို့မိသားစုဘက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ရပ်တည်လို့မရအောင် ထိုးနှက်ချက်လို့ မြင်တယ်"
"ဥပဒေကြောင်းအရ ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ရဦးမယ်။ ငြိစွန်းတယ်ဆိုရင်တော့ သမီးအတွက်က ဘာမဆို ရင်ဆိုင်မယ်" လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သံသယတရားခံ ကိုအောင်ကြီးကို တရားရှင်လွှတ်လိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး "အပြစ်မရှိတဲ့လူ လွတ်သွားတာတော့ ဝမ်းသာပါတယ်။ ကျွန်တော့် သမီးလေးအတွက် အမှန်တရားက ဝေးကွာသွားပြီလား" လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီလို ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားရှင်လွတ်မြောက်လာသူ ကိုအောင်ကြီးရဲ့ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က " အဲဒီဥစ္စာက တော်တော် အရုပ်ဆိုးတဲ့ ကိစ္စ။ မကြာသေးခင်ကမှ ထွက်ထားတဲ့ ကလေးသူငယ်ရဲ့ ဥပဒေ ရှိတယ်လေ။ အဲဒီ ကလေးသူငယ် ဥပဒေမှာ ပုဒ်မ ၉၆ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကို ဖောက်ဖျက်ရင် ကလေးသူငယ် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀၁ (က) အရ အနည်းဆုံး လေးလကနေ အများဆုံး တစ်နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ အနည်းဆုံး (ကျပ်) လေးသိန်းက အများဆုံး ကျပ်ခြောက်သိန်းအထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်" လို့ ပြောပါတယ်။
"အဲတော့ ဥပဒေကို သိတဲ့ ရဲတွေအနေနဲ့ ပြီးတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲအနေနဲ့ ဒီဟာကြီးကတော့ မလုပ်သင့်ဘူး ထင်တယ်။ မမှားသင့်ဘူးထင်တယ်။ သူက သိသိချည်းနဲ့ မှားသလား မသိဘူးပေါ့ဗျာ။ သူတို့က အဲဒါတော့ ငြိနေပြီပေါ့။ ဥပဒေနဲ့" လို့ ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုအောင်ကြီးကို တရားရှင်လွှတ်လိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး "ဒီအမှုက ရဲက ပြောသွားတယ် အချိန်စောလွန်းတယ် ဘာညာဆိုတော့ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းမှာတော့ အဖြေပေါ်မှာ မဟုတ်သေးဘူး"
"ဘာလို့ဆိုတော့ မန္တလေးတိုင်း တရားလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့မှ စွဲချက်မတင်ခင် လွှတ်ထားတဲ့ ကိစ္စကို ဆက်စစ်ဦး၊ ၂၅၃ (၁) အရ အကုန်ကုန်မှ လွှတ်တာ ဖြစ်စေ၊ စွဲချက်တင်ပြီးတော့မှ အပြီးသတ် အမိန့်ချတာ ဖြစ်စေ လုပ်ဦးဆိုရင် ဒါက ဆက်သွားရမှာ"
"ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းမှာ မီးမသေသေးဘူး။ အပေါ်ရုံးက ပြင်ကောင်း ပြင်နိုင်တယ်" လို့ လည်း ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောပါတယ်။
သံသယတရားခံကို တရားရုံးက ပယ်လိုက်တဲ့အတွက် အမှန်တရားကို ရှာဖို့က ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှာ နစ်နာသူမိသားစုဘက် လိုက်ပါကူညီနေတဲ့ ဒေါက်တာဝင်းကိုကိုသိန်းက "ဥပဒေနဲ့ အထူးသဖြင့် ကလေးသူငယ် ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းမှု ရှိသလားတိုင်ပင်မယ်။ အဲဒီအတိုင်းဆက်လုပ်မယ်"
"ကျွန်တော်တို့က ဆက်လုပ်မှာ။ ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာ ဥပဒေကို ကျော်ပြီး ဘာမှ မလုပ်ဘူး။ ဥပဒေဘောင်ထဲကပဲ လုပ်မယ်" လို့ ပြောပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းစာရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ အမှုဟာ နေပြည်တော် Wisdom Hill မူကြိုက အသက် သုံးနှစ်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးငယ် လိင်မတရားပြုကျင့်ခံရတယ်ဆိုပြီး မေလလယ်မှာ မိသားစုက တိုင်တန်းထားတဲ့အမှုဖြစ်ပြီး ဒီအမှုကို နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင် တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအမှုမှာ နစ်နာသူကလေးငယ်ကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ကလေးနာမည်ကို ထုတ်ဖော်မပြောကြားဘဲ ဒီအမှုကို ဗစ်တိုးရီးယားအမှုလို့ အများက ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေကြရာက အခုလို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေ မိသားစု ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲက အဲဒီလို ထုတ်ပြောအပြီးမှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ထုတ်လွှင့်ခဲ့ကြတဲ့ မီဒီယာတွေက ရဲတပ်ဖွဲ့ရှင်းလင်းချက်မှာ ကလေးမိသားစုကို ဖော်ထုတ်တာပါတယ်ဆိုပြီး အဲဒီထုတ်လွှင့်မှုကို ပြန်ဖြုတ်ချခဲ့ပါတယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးသူတွေကလည်း ရဲဇာနည် စာမျက်နှာမှာ ကလေးကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားတဲ့အတွက် ဝေဖန်မှတ်ချက်တွေ ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီနောက် ရဲဇာနည် စာမျက်နှာကနေ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ အမှုနဲ့ ကလေးမိသားစုနာမည်နဲ့ အချက်အလက်တွေပါတဲ့ သက်သေအချက်အလက်၊ အထောက်အထား စာရွက်တွေကို ပြန်ဖြုတ်ချသွားခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဗစ်တိုးရီးယားအမှု - ရဲသတင်းစာရှင်းလင်းချက် ဥပဒေနဲငြိရင် တရားစွဲမယ်လို့ဆို